Izvo zvinhu gumi zvaunoda kuziva nezve Pramiracetam- Shangke Chemical
Izvo zvinhu gumi zvaunoda kuziva nezve Pramiracetam
Pramiracetam poda unobva kumhuri yevahlanga. Kuwanikwa kwayo uye kuvapo kwakatanga kare muna1970s, nekuda kweParke-Davis Company. Chii chinotaurira iyi nootropic kubva kune mamwe maarangi ndeye iyo yemamero mamiriro uye yakakwirira potency.
Kwemakore, pramiracetam kushandiswa rave riri rose kutsamwa mukurapa kwechirwere chemoyo, chirwere cheAlzheimer, uye kumwe kurwara kwemitsipa. Mumakore ekuma80s nekutanga kwe90s, kwakave kwakawanda kwakabudirira kliniki miedzo, yakaratidza iko kushanda kwe pramiracetam mukudzora kurasikirwa kwekuyeuka.
Hwechokwadi hwemushonga uyu hausi wakaomarara semamwe nootropics. Semuenzaniso, unogona nenzira chaiyo buy pramiracetam powder uye ishandise pasina kusundira mafudzi pamwe nevane masimba. Kunyangwe iwe usingakwanise kutenga chigadzirwa muCanada, unogona kuendesa kunze kwenyika zviri pamutemo kuti ushandise wega. MuEurope, pramiracetam poda inongowanikwa chete pasi pemutemo wakaringana wekugadzirisa dyslexia, dementia, Alzheimer's, uye ADHD.
Pramiracetam kushandiswa inozivikanwa munzvimbo ye nootropics nekuda kwekuita kwayo. Iyo inokwana makumi matatu anoshanda kupfuura piracetam. Mushonga unoshanda zvemashiripiti kunyange nediki diki. Iyo yakanyanya bioava kuwanikwa neakareba hafu-hupenyu.
Icho chokwadi chekuti iwe haunganzwe chero mhedzisiro inoita kuti pramiracetam iwane ruzivo. Mushonga wacho haupindwe muropa zvachose. Yakachengeteka uye inoshivirirwa zvakanaka mumuviri wemunhu. Kune kwakabudirira miedzo yemunhu inopikira nekuita kweizvi nootropic. Kunze kwezvo, iyo inogara zvakanaka pamwe nemitambo yakawanda yemitambo uye nezvimwe nootropics powder.
Chimwezve chinhu chinonzi pramiracetam ndechekuti kuwana kwakafanana nekutenga jozi rekutuhwina. Iko hakuna mitemo yakaoma inoda kuti iwe uve nekunyorerwa, kunyanya kuUS.
Pramiracetam Inoshanda Sei?
Pramiracetam mafuta-akasungunuka nootropic inopinda muropa kuburikidza nemafuta acids. Iyo ine yakakwira bioavailability uye inosvika kune yakakwirira yevasungwa mumaminetsi makumi matatu.
Uyu mushonga wakangwara unokonzera kuwedzera kwe choline kutora mu hippocampus. Nekudaro, iyo isina kunongedzera inorongedza kuburitswa kweacetylcholine (ACh), iyo inoshanda kune akati wandei mabasa epfungwa.
ACh ine chekuita nekuumbwa uye kuchengetwa kwekuyeuka kwenguva refu. Kunze kwezvo, iyo neurotransmitter inotungamira kune kuwedzera kweropa rekuyerera, chinhu chinogadzirisa kuziva.
Chii chinoshandiswa nePramiracetam?
MuEurope, Pramiracetam kushandiswa chinotenderwa mukurapa kwechirwere chepfungwa. Iyi neuroprotective smart drug inoshanda zvakanaka mukuvandudza kwenguva refu yekurangarira uye inowedzera mabasa euchenjeri. MuUS neCanada, vadzidzi vanotenga pramiracetam poda yekushandiswa-kweleel drug senge mushonga wekudzidza kana uchiruma bvunzo huru.
Kubva payakavambwa muna1979, Pramiracetam yave iri mushonga wekunyora kune varwere vane neurodegenerative chirwere uye uropi traumas. Musika wayo wainanga
Mhedzisiro & Zvakanakira Pramiracetam
Pramiracetam inosimudzira revo yekurangarira. Masayendisiti haana kungoedza aya ma nootropics pane modine mhando asiwo nevanhu.
Mushonga unoshanda nekusimudzira hippocampus kugadzira ndangariro nyowani, kuchengeta zvekare zvekare, uye kuderedza kukanganwa. Vadzidzi vazhinji vanotora mufaro mune pramiracetam ruzivo kusimudzira ndangariro yavo kana vachidzidzira bvunzo.
Management of Cognitive Zvirwere
Pave nemakiriniki anoverengeka emiedzo ayo anoratidza kushanda kwePramiracetam poda pakudzivirira uhure hwezvirwere.
Pramiracetam inobatsira varwere vane dementia nekudzoreredza amnesia uye kuwedzeredza kuyeuka. MuEurope, semuenzaniso, mushonga wakangwara uri mutemo wepamutemo wekugadzirisa chirwere cheAlzheimer's.
kutora pramiracetam makapu anozochengetedza mauroni ako. Iyo nootropic inodzosera kusanzwisisika kune varwere vakatambura nehuropi kushungurudzika kweCypbrovascular kwayakatangira. Chii zvakare, chinoderedza kungwara kuderera kunogona kuitika nekuda kwekufumurwa kune amnesic zvinodhaka senge scopolamine.
High Kudzidza kugona
Ongororo dzinoverengeka dzinosimbisa kuti kutora pramiracetam nootropic zvinodhaka kuchavandudza kudzidza kwema spatial. It is a inonzwisisika inowedzera izvo zvinokuita kuti ubate zvinhu nyore.
Iyo nootropic inodhonzera basa re nitric oxide synthase mu hippocampus. Iyi neurotransmitter inoderedza kusagadzikana kwekuziva uye inotora chikamu chakakosha pakudzidza nekuyeuka. Inoshanda nekuwedzera kuwedzerwa kweropa kuhuropi, nekudaro, modulates zviitwa zvetsinga.
Pramiracetam inobatsira iyo yepakati sisitimu system nekukwira kugadzirwa kweacetylcholine, iyo zvakare ine ruoko mukudzidza. Kunze kwezvo, iwe uchave uine unopinza, unoteerera, uye wakasvinura.
Iyo Yakakurudzirwa Pramiracetam Powder Dosage Kana Ichishandiswa Uri Woga
Awo mazuva ese pramiracetam dosage iri pakati pe400mg ne600mg. Mune zvidzidzo zviripo zvekiriniki, izvo zvidzidzo zvaigona kutora kusvika ku1200mg ye smart drug, kunyanya mushure mekudya.
Sezvo pramiracetam poda ine zvishoma zvishoma hafu-hupenyu, unogona kupatsanura iyo dhifaji kuita maviri. Ichi chiyero chiri mukana chaiwo kuboka remishonga. Matatu matatu pazuva anokwanisa kuve sarudzo yekupedzisira asi iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti unorongedza mishonga yako kwemaawa mashoma usati warara. Iwe haudi kuvhiringidza nechitenderera chako chinonzi circadian.
Unogona kutenga Pramiracetam mune capsule kana fomu yepiritsi. Iyo poda yakanyorova-yakanyungudika, saka, haizove zano rakanaka kuiwedzera mune chinwiwa chako. Neimwe nzira, iwe unogona kuiputsa mu kokonati mafuta kana chero imwe lipids. Kana iwe uchinetswa ne pungent flavour, iwe unofanirwa kusarudza iyo pramiracetam macaps.
SeNewbie, ita chokwadi chekutanga kubva kune yakaderera yakaderera dovhizheni sezvaunotarisa muviri wako kunetsungirira nemhedzisiro. Mushure meizvozvo, iwe unokwanisa kugadzirisa iyo dosage kune yako yaunoda uye kunyange kuwedzera imwe pramiracetam stacks.
Pramiracetam Side Mhedzisiro yaunofanirwa Kuziva
Kusiyana nemamwe majaho, Pramiracetam mhedzisiro ndeyekuita. Muviri wako unokwanisa kushivirira iyo yekuwedzera zvisinei nedhidhi.
Unogona kusangana nezviratidzo zvenguva pfupi sepririracetam kutemwa nemusoro, chizunguzungu, kushaya hope, kutambudzika kwematumbu, kana kushushikana. Nekudaro, iwe unogona kudzivirira iyo yakaipa mhedzisiro nekudzora pramiracetam dosage. Kana iwe uchinge uchirwa nemusoro kazhinji, iwe ungangoda kutambisa neine choline.
Piracetam ndiye akafanogadzwa kwehumwe humwe nootropics mumhuri yeRacetam nekutanga kwayo kutanga kare kuma1970s. Sezvineiwo, pramiracetam inobviswa yeiyo smart drug.
Idzi nhandare mbiri dzine maitiro akafanana. Nekudaro, ivo vanosiyana nevakaita mamoreky. Semuenzaniso, pramiracetam smart drug rinosvika makumi matatu nguva rine simba uye rakanyanya kushanda kupfuura iro rekutanga kwaro. Chii zvakare, iyo nootropic ine yakakwirira bioavailability.
Pramiracetam Stack Zano
Pramiracetam potentiates mhedzisiro yeimwe nootropics. Ichi chinodhaka chine simba pese pese asi unogona kuchibaya nemamwe mauto uye nemacolinergic anowedzera.
Kana iwe uri mutsva mune nootropics domain, haufanirwe kunge uchimhanyisa kuedza chero pramiracetam stack. Mushure mezvose, uyu mushonga wakangwara uchiri kushanda zvakanaka sechinhu chakamira-wega. Kamwe yako system inogona kumira nemhedzisiro ye pramiracetam, iwe unenge wakasununguka kuisanganisa iyo pamwe nootropics.
Cholinergic supplements yakanakira mune iyi stacking sezvavanogadzirisa pramiracetam misoro.
Pramiracetam uye Oxiracetam Stack
Iyi stack pasina mubvunzo inowedzera kaviri kugona kwako kutarisa, kugara wakasvinura, uye kusheedzera kumashure kune yako yakapfuura.
Kune imwe neimwe unit ye oxiracetam, iwe uchafanirwa kutora zvikamu zvina zve pramiracetam capsules. Tora, semuenzaniso, kana mudura wako unosanganisira 800mg ye pramiracetam dosage, iwe unofanirwa kuisa 200mg ye oxiracetam.
Zuva Nezuva Dose
200mg ye oxiracetam
800mg ye pramiracetam
300mg ye choline
Pramiracetam uye Aniracetam Stack
Kunze kwekukurudzira mashandiro ehuropi, idzi mbiri dzinza dzinopedza kusagadzikana, kushaya hanya, uye kushushikana.
Aniracetam ine pfupi hafu-hupenyu kana ichienzaniswa nemupikisi wayo. Nekudaro, iyo inokwenenzvera munguva uye kutanga kuita usati waona iyo pramiracetam mabhenefiti. Kuomesa aya maviri zvakare kunokutadzisa kubva mukukudziridza kushivirira kune imwe nootropic.
Kune imwe neimwe pramiracetam dosage, iwe uchazoda anenge mazana mazana matanhatu ezviuru zveAniracetam.
Pramiracetam uye Alpha GPC stack
Izvi pramiracetam stack ndiyo yekupedzisira sosi yeacetylcholine. Haingori chete inowedzera basa rehuropi asi zvakare inovandudza ndangariro. Iko kusanganisa kweAlpha GPC ndeyekuti inogadzirwa zvakanyanya sezvo ichiyambuka zvakanyanya neropa repfungwa.
Kuwedzeredza neGPC choline inogadzirisa mimwe yemigumisiro yePramiracetam semusoro. Kunze kwezvo, iyo inogadzirisa mitsipa, inogadzirisa yakaneta-kunze masero membrane, uye inogadzira acetylcholine, iyo yakakosha neurotransmitter inotarisira ndangariro.
Kwedhidhi yako yemazuva ese, iwe uchada anenge 400mg ye Alpha GPC kuwedzera.
400mg Alpha GPC inowedzera
Coluracetam inozorodza pfungwa dzako, inosimudzira kufungisisa, uye nekudzoreredza kwenguva refu ndangariro. Iyo inosimudzira iko kutora kwe choline mumasero e-neuronal. Chii zvakare, iyo yekuwedzera iyi yakanaka kune maziso sezvo inogadzirisa maziso e-nerve uye kukuvara kwepashure.
Kune yako pramiracetam stack, iyo 30mg ye coluracetam zvakwana.
30mg ye coluracetam
400mg ye pramiracetam
Sei uye kupi yekutenga pramiracetam poda?
Unogona kutenga nootropics pramiracetam muupfu, capsule, kana fomu yepiritsi. Mushonga wakangwara hauna kugamuchira mvumo neFDA asi uchiri kugona kuumburudza pazvitoro zvinooneka. Kune akati wandei misika diki yakatenderedza uye nekudaro, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti iwe unowira kumutengesi wepamhepo ane mukurumbira.
Iwe unogona bhangi patiri kune yako yekurara nekuti isu tine proven track track yekutengesa zviri pamutemo nootropics. Isu tinoita yakazvimirira marabhoritari kuyedza pane vese zvigadzirwa zvedu usati wavatengesa kune vatengi vedu vanoremekedzwa.
Muchiitiko iwe uri kunetseka kuti nei pramiracetam makapu ari mutengo kupfuura mamwe majaho, ini ndinokupa chikonzero. Synthesizing chinhu ichi chiri pedyo nepepuru yechiGiriki. Maitiro acho akaomesesa kupfuura zvazviri panguva yekuumbwa kweazhinji nootropics.
Nootropics pramiracetam mushonga unokwanisa kushandisa zvinodhaka wekuwedzera kugona kwako. Iyi sarudzo yakanaka kune vese vakuru uye vanhu vane hutano vanoda kutarisa, kuramba vakamuka, uye kugadzikana kwepfungwa mumabasa avo ezuva nezuva. Iyo yekuwedzera inobatsira varwere vane neurodegenerative mamiriro kuti vatore avo vakarasika ndangariro uye chengetedza yega yega ruzivo.
Yese nootropics yakamboedzwa preclinical miedzo asi pramiracetam iri pakati pezvishoma zvakaedzwa pane vanhu zvidzidzo. Kubva pane akasiyana-siyana zvidzidzo zvekutsvagira, zviri pachena kuti mushonga uyu wakachengeteka pakushandisa uye unobvumiranwa zvakanaka mumuviri.
McLean, A., Cardenas, DD, Burgess, D., Gamzu, E. (1991). Placebo-inodzorwa kudzidza pramiracetam mune vadiki vechidiki vane ndangariro uye zvinetso zvekuziva zvinokonzerwa nekukuvara kwemusoro uye anoxia. Brain Kukuvara.
Corasaniti, MT, et al. (1995). Systemic management ye pramiracetam inowedzera nitric oxide synthase chiitiko mune yeketekal cortex ye rat. Basa Neurology.
Tkachev, AV (2007). Kushandiswa kweanotropic vamiririri mune kwakaoma kurapa kwevarwere vane concussion yeuropi. Likars'ka sprava.
Pugsley, TA, et al. (1983). Mamwe ma neurochemical zvivakwa zve pramiracetam (CI-879), mutsva wekuziva-inowedzera mumiriri. Drug Development Research / Vhoriyamu 3, Chinyorwa 5.
Auteri, A., Blardi, P., Celasco, G., Segre, G., Urso, R. (1992). Pharmacokinetics ye pramiracetam mune vanozvipira vane hutano mushure mekutonga kwemuromo. International Journal yeClinical Pharmacology Tsvakurudzo.
Claus, JJ, et al. (1991). Nootropic zvinodhaka muAlzheimer's chirwere: chiratidzo chekurapa ne pramiracetam.
Chang, T., Mudiki, MR, Goulet, RJ, uye Yakatan, JG (1985). Pharmacokinetics yemuromo pramiracetam mune zvakajairika vanozvipira. Chinyorwa cheClinical Pharmacology.
2.Why Pramiracetam Yakakurumbira?
3.Ko Pramiracetam Inoshanda Sei?
4.Kupi kushandisa kwePramiracetam?
5.The Migumisiro & Zvakanakira Pramiracetam
6.Iyo Yakakurudzirwa Pramiracetam Powder Dosage Kana Ichishandiswa Uri Woga
7.Pramiracetam Side Mhedzisiro yaunofanira Kuziva
8Pramiracetam VS Piracetam
9.Pramiracetam Stack Zano
10.Ko uye kupi kutenga pramiracetam poda?